कोरोनाबाट बच्न दैनिक ८/१० घण्टा सुत्नुहोस : डा. रवीन्द्र पाण्डे – Namaste Dainik
कोरोनाबाट बच्न दैनिक ८/१० घण्टा सुत्नुहोस : डा. रवीन्द्र पाण्डे
August 30, 2020 August 30, 2020 NamastedainikLeaveaComment on कोरोनाबाट बच्न दैनिक ८/१० घण्टा सुत्नुहोस : डा. रवीन्द्र पाण्डे
१४ भाद्र २०७७, आईतवार काठमाडौं , कोरोना संक्रमणलगायत विभिन्न रोगसँग लड्न शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली (इम्युनिटी पावर) ब’लियो बनाउनुपर्नेमा सबै विज्ञ एकमत छन्। विज्ञका अनुसार शरीरको त्यो ‘पावर’ बलियो बनाउने विभिन्न उपायमध्ये पर्याप्त निद्रा पनि एक हो। यसै सन्दर्भमा जनस्वास्थ्यविद् डा. रवीन्द्र पाण्डेले रातिको समयमा पर्याप्त सुत्ने व्यक्तिको इम्युनिटी पावर राम्रो हुने बताएका छन् । त्यसका लागि उनले कुन उमेरका व्यक्तिले कति घण्टा सुत्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका छन्।
उनले लेखेकाछन- कोरोना संक्रमण लगायतका रोगहरुसंग लड्नको लागि निद्राको ठूलो भूमिका छ । रातिको समयमा पर्याप्त सुत्ने व्यक्तिको इम्युनिटी पावर राम्रो हुन्छ । हामी सबैले अनुभव गरेका छौं कि निद्रा नपुगेका दिनमा हामी दिनभर ताजगी अनुभव गर्न सक्दैनौं । हाम्रो जोश, जाँगर, उमंग तथा उत्साह मुर्झाएको हामीले अनुभव गर्दछौं । त्यस्तै राम्रोसंग निद्रा परेको समयमा हामी आफुलाई निकै स्वास्थ्य अनुभव गर्दछौं । हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा निद्रालाई आहार जत्तिकै महत्व दिइएको छ । हामी रातिमा ७-९ घण्टा सुत्यौं भने मेलाटोनिन नामक हर्मोनको उत्पादन राम्रो हुन्छ ।
जसले गर्दा हामी खुसी हुन्छौं साथै रोगसँग लड्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ हामी कति घण्टा सुत्नुपर्छ ? १४- २५ बर्षको उमेरको व्यक्तिलाई = ८- १० घण्टा , २६-६४ बर्षको व्यक्तिलाई = ७- ९ घण्टा, ६५ वर्ष तथा सो भन्दा धेरै उमेरका व्यक्तिलाई = ७- ८ घन्टा
कोरोना पुष्टि भएका २ सय जना स’म्पर्कबिहीन भएको खुलासा